Lezi izitimela akuzona njengoba njalo njengoba kulindelwe banikezwe ibangana phakathi izindawo. Ngokuvamile ukusebenza uma njalo ngehora, kodwa lokhu kungahluka ngezikhathi ezithile. Nokho, ngaso sonke isikhathi kungcono ukucela imininingwane eyengeziwe yokuhamba uma uthenga ithikithi lakho. Ngaphezu kokwazi isheduli kanye nohambo isikhathi lokhu umzila wesitimela, kubalulekile ukuqinisekisa amathikithi akho. Kukhona imishini Ukuqinisekiswa ezisekelweni isitimela ongazisebenzisa. Okufanele ukwenze nje sehla kwengxenye encane ithikithi embotsheni umshini ezincane yellow bese ulinda ukuzwa isitembu.
Riomaggiore kuyofakazela kube first stop (uma uphokophelephi kusukela La Spezia) noma stop yesihlanu (uma uphokophelephi kusukela Levanto). Nokho, ibizwa cishe kuzoba uyisitobhi sokuqala zingaki izivakashi Cinque Terre, ngoba kuyindlela esheshayo yokuthola lapho. Riomaggiore iyona enkulu ezigodini ezinhlanu, futhi iyinhloko-dolobha olungekho emthethweni njengoba epaki ehhovisi main kukhona. I izakhiwo aqhwakele konke ezintendeni udonga emaweni, yonke indlela eya ethekwini ezincane. Isimo saleli uyaxebuka izindlu iyashintsha iyaphupha ibe kuyinto olunothile futhi uzohlala inkumbulo yakho kuze kube phakade. Kuyinto emehlweni kumnandi ukubona ekushoneni kwelanga, and it is a must-see for couples that want to share a special moment.
Idolobhana ngalinye kulawa amahlanu linentelezi ethile. Corniglia ekhetheke ngoba ayikho kwaleli chibi. Nokho, lokho awunazo e amabhishi, kakhulu yona kunezimvu ezingu yakha for nge sinento yaso ehlukile enhle. UCorniglia uzizwa ekude kakhulu kunale eminye imizi. Nokho, inikeza lathambisa kakhudlwana futhi lendawo emkhathini. Leli dolobhana ivame ukunganakwa ngoba emizileni yayo olukhandlayo. Ngokungafani nezinye ezigodini engafinyelelwa ngesikebhe, ICorniglia ivuliwe esiqongweni sezintaba futhi ayinakho ukufinyelela olwandle. Okuwukuphela kwendlela ukufinyelela ngayo sihambe le Cinque Terre endleleni noma uthatha isitimela. Nokho, kubalulekile wazi ukuthi isitimela ngeke onga you phi umzamo. Usazodinga ukuhamba ngezitebhisi ezithile ukuze ufinyelele enkabeni yedolobhana futhi ubone konke okunikelwa yidolobhana.
Vernazza kubhekwa njengento omunye ezigodini eziningi ezinhle e hhayi kuphela Cinque Terre, kodwa lonke izwe Italy. Isibili yiyo jewel ukuthweswa umqhele ka Cinque Terre eyenza abaningi babanjwa uthando ne uhambo. It has a nokuzwakala nenhle kakhulu futhi owamukelekayo wokuthi izincwadi kwamanye amadolobhana bantule. Hlanganisa lokho nokudla okuhlukile nokubuka okuhle, futhi uthola indawo enikeza ukuvakashelwa yesibili. Qiniseka ukuthi uvakashela enqabeni Doria lapho Vernazza. Iqukethe asigubhayo kwemibhoshongo yokuqala ukuthi livikela abantu amashumi eminyaka emzaneni edlule.
Monterosso al Mare ngokungangabazeki kakhulu touristy kanye resort-like edolobheni Cinque Terre. It has izimoto, amahhotela, namabhishi amatshe amatshe alungele izivakashi. Uma ufuna ukuvakashela le ngxenye ngendlela emangalisayo Italy, kodwa bakhetha a Vibe zanamuhla, ke Monterosso ukuphi. Monterosso has a ukuvakasha ukuthi uphelele usiphawule kusihlwa, ngisho kangcono, banayo ukudla kwekhethelo ezokwenza umuntu ukujabulela ukudla kwasolwandle.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Quick Guide: Indlela Izikhangibavakashi Cinque Terre ngu zemininingwane” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-travel-cinque-terre-train%2F%3Flang%3Dzu – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)